-२०७५ फाल्गुण २९
भूमाफियासँगको उपरोक्त साँठगाँठलाई कोरा कल्पना मान्ने हो भने पनि गोदावरीको जंगल काटेर राजधानी बसाउने सोच अनौठो देखिन्छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम चलिरहेको पृष्ठभूमिसमेत नहेरेर निर्णय गरिएको छ ।
उच्चस्तरीय समिति हत्याकाण्डको वास्तविक अपराधीसम्म पुग्न सकेन भने ठूलो अनिष्टको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसको पहिलो कोपभाजन अनुसन्धान टोली नै हुने छ । टोलीका सदस्यहरुको करिअर र पद नै धरापमा पनि पर्नसक्ने देखिन्छ । एक महिनाको अवधिमा जनता र प्रेसका कुरा सुन्न नसक्ने संयन्त्रले घेरिएर बसेका प्रदेश–७ का प्रहरी प्रमुख र प्रहरी महानिरीक्षक मात्रै होइन गृहमन्त्री समेत असफलताबाट उत्पन्न हुने परिणामको भागिदार बन्नेछन् ।
मैले मंगलबार लेखेको ‘निर्मला हत्याकाण्डका नखुलेका पाटा’ शीर्षकको लेखमा केही महत्वपूण कुरा छुटेका हुनाले लेखलाई निरन्तरता दिएको हुँ । आमपाठकको बुझाई निखार्नु तथा उच्चस्तरीय अनुसन्धान टोलीलाई सहयोग पुर्‍याउनु मात्रै यो लेखको उद्देश्य हो ।
तीन साता बितिसक्दा पनि प्रहरीले ‘शून्य’ सफलता पाएको अधिकारीहरु नै गर्वसाथ फलाकिरहेका छन् । जिम्मेवार अधिकारीहरु अनुसन्धान चलिरहेकै बेला निष्कर्षयुक्त वक्तव्यवाजी गरिरहेका छन् । उनीहरुको नियतमा प्रष्ट खोट देखिन्छ र सीआईबीको अनुसन्धान समेत प्रभावित गर्ने नियतले काम भइरहेको त होइन भन्ने आशंका गर्ने प्रसस्त ठाउँ पनि भेटिएको छ ।
भखरै एसईई परीक्षाको नतीजा निसकेको छ । फलामको ढोका मानिएको यो परीक्षालाई अवसरमा परीणात गर्ने मुख्य जिम्म्ोबारी विद्यार्थी स्वयंको हो । बिषय छनोट, ब्यक्तिगत रुचि, अन्तर्निहित क्षमता इत्यादीले सफलतालाई प्रभाबित गर्दछ ।
कर्मचारी भर्ना, सम्बन्धनलगायतका कार्यहरुमा प्रत्यक्ष रुपमा राजनीतिक दलका गोटीका रुपमा केही प्राध्यापकहरु देखा पर्ने गर्दछन् । राजनीतिक दाउपेचका भरमा पदाधिकारी भएका प्राध्यापक भने पदीय मर्यादा भन्दाबाहिर गई कार्य गर्ने गरेको हाम्रा लागि कुनै नौलो होइन ।
निर्वाचितहरुले गर्ने सबै काम पार्टीका काम होइनन् । उनीहरुले राम्रा काम गरे सबैभन्दा पहिले उनीहरुलाई नै फाइदा हुन्छ । तर, उनीहरुले गर्ने गल्तीले भने सबैभन्दा पहिले पार्टीलाई क्षति हुन्छ । व्यक्तिगत लाभका लागि काम गर्दा मात्रै गल्ती हुने हो । लाभ उनीहरुले लिने, क्षति पार्टीलाई हुने हो भने किन चुप लागेर बस्ने ?
केपी ओलीको दोस्रो इनिङका दुई हप्ता
कार्यालयका कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई भुल्नु हुँदैन् । सर्र्वसाधारण नागरिकले गर्ने विश्वासलाई अख्तियार कार्यालयका कर्मचारीले बुझ्नु जरुरी छ ।
अनि २००७ सालमा नेपाली कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा सशस्त्र क्रान्ति भएपछि नेपालमा राणाशासन विदा भई प्रजातन्त्रको उदय भएको हो । त्यसैले अहिलेसम्मको आधुनिक राजनितिक यात्रामा नेपालीको अनुभव जम्मा ६ दशकको भयो भन्नुपर्छ ।
चार ओटा नवरात्रिमध्येको सारस्वत नवरात्रिमा रुपमा माघ शुक्ल प्रतिपदा देखि नवमीसममको पर्वृलाई लिइन्छ । सृष्टिको आदिकालमा पितामहको चैतमन्थ शक्ति द्धारा मुखबाट सरस्वतीको जन्म भएको हो । त्यसैले वाणीकी देवी भनेर भनिन्छ । सरस्वतीको वर्ण गोरो हुन्छ ।
सौभाग्यले मलाई त्यो समन्वय गर्ने अभिारा सुप विवि कार्यक्रम संयोजकको नाताले प्राप्त भयो । तत्पश्चात् विश्व विद्यालयको रुपमा स्थापित संस्थामा प्रथम क्याम्पस प्रमुखको दायित्व समाल्ने अवसर पनि प्राप्त भयो । अहिले हुन गईरहेको प्रथम दीक्षान्त समारोहमा सहभागी हुन गईरहेका विद्यार्थि मेरो कार्यकालका प्रथम ब्याचका विद्यार्थि भएकाले पनि म व्यत्तिगत रुपले पनि आफुलाई सौभाग्यशाली ठान्दछु ।
प्राध्यापकको खस्कँदो साख !
विद्यार्थीलाई देशका समस्यासँग परिचित गराउँदै समस्या समाधानका लागि उनीहरूलाई विभिन्न किसिमका अनुसन्धान तथा सीप सिकाइनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेको छैन । राजनीतिमा लागे राम्रा उच्च पद पाइने र विभिन्न नेता तथा व्यक्तिलाइ थर्काउन पाइने भएकाले समेत प्राध्यापकको राजनीतितर्फ आकर्षण बढ्दो छ । पदीय लोभमा परेर शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफ्नो शक्तिलाई बिर्सेका छन् ।
रामले अयोध्या, कृष्णले मथुरा, सीताले जनकपुर, ब्रह्माले पुष्कर, नारायणले कालीगण्डकी, हनुमानले पप्पापुर, गौतम बुद्धले लुम्बिनीमा जन्म लिएर तत्तत् स्थानलाई विश्व प्रसिद्ध बनाए भने गौरादेवी मानसभूमिमा जन्म लिएर काली–कर्णालीको पवित्र देवभूमिलाई विश्वमा बिख्यात बनाएको छ । गौरादेवी भन्ने बित्तिकै मानस शब्द स्वतस्फूर्त रुपमा जन्मन्छ । किनभने, गौराको जन्म मानसबाट हुन्छ भने मानसको प्रसिद्ध गौराका कारण हुन्छ, गौरालाई गौराको रुपमा परिभाषित गर्न मानसभूमिकै आवश्यकता पर्दछ । त्यसैले गौरा पर्व मानसको हो, मानस क्षेत्र गौराको हो ।
भीम र अतवारी ब्रत महिमा
नेपालको तराईका मूल वासिन्दा आदिवासी थारुहरू विशेषतः कृष्णाष्टमी, अतवारी ब्रत बस्छन्, जितिया, सामाचकेवा मान्छन् । कृष्ण जन्माष्टमी (अष्टिम्कि) भाद्र महिनाको कृष्ण पक्षको अष्टमी तिथिमा पर्दछ भने अतवारी ब्रत भाद्र शुक्ल पक्ष (ओजरीया) को पहिलो आईतबार पर्दछ । यस सम्बन्धमा विकिपिडियामा भनिएको छ, ‘यो ब्रत कुनै पनि महिनाको शुक्ल पक्षको पहिलो आईतबार सुरु गरेर कम्तिमा १ वर्ष र बढीमा १२ वर्ष बस्न सकिन्छ । यसले के भन्छ भने कुनै पनि महिनाको शुक्ल पक्षको पहिलो आईतबार यसलाई सुरु गर्न सकिन्छ । थारुहरू पहिलेदेखि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको पहिलो आईतबारलाई बर्का अतवार/अतवारी मान्ने गरेका छन्, जुन कुष्ण जन्माष्टमीपछि पर्ने गर्दछ ।